Ndị na-eso ụz Jizọs nwedịrị ike chọwa ka a na-anụ aha ha. N’ihi ya, Jizọs dọrọ ha aka ná ntị, sị: “Ka a ghara ịkpọ unu onwe unu Rabaị, n’ihi na otu onye bụ onye ozizi unu, ma unu niile bụ ụmụnna. Unu akpọkwala onye ọ bụla nna unu n’elu ụwa, n’ihi na otu onye bụ Nna unu, ya bụ, Onye nke eluigwe. Ka a gharakwa ịkpọ unu ‘ndị ndú,’ n’ihi na Onye Ndú unu bụ otu onye, ya bụ, Kraịst.” Olee otú ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-esi na-ele onwe ha anya ma na-akpa àgwà? Jizọs gwara ha, sị: “Onye kasị ukwuu n’etiti unu aghaghị ịbụ onye na-ejere unu ozi. Onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala, onye ọ bụla nke na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu.”—Matiu 23:8-12.
mailto:?body=Jizọs Akatọọ Ndị Na-emegide Ya%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014709%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Jizọs Akatọọ Ndị Na-emegide Ya